10 Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa
Atụmatụ njem Eco, Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 18/06/2021)
99% nke ndị na-achọ anụ ọhịa na-ahọrọ ịga Africa maka epic safari epic. Otú ọ dị, anyị ahọrọla 10 ebe kachasị mma anụ ọhịa na ụwa, site na Europe ruo China, onye na-emeghi njem, ma ihe kacha echefu echefu na ebe puru iche.
Tolọ na 40% nke ụdị anụ ọhịa, na anụmanụ na China, ndagwurugwu Jiuzhaigou bu 4800 mita n'ịdị elu. Ndagwurugwu Jiuzhaigou bụ otu n'ime 10 kacha mma anụ ọhịa aga n'ụwa na a breathtaking odida obodo na usoro okike bara ụba.
Na Ndagwurugwu Jiuzhaigou, ị ga-enwe ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa ịhụ Nnukwu Panda, acha uhie uhie, Sichuan takin, na enwe imi-imi enwe. Ndị a bụ ụfọdụ n’ime anụmanụ ndị ọzọ dị obere na ndagwurugwu Jiuzhaigou ọtụtụ narị afọ. Speciesdị anụmanụ ndị a nọ n'ihe ize ndụ na-ebi n'akụkụ ebe mmiri na-asọ, ọdọ mmiri, ugwu nzu, na usoro Krast, ebe mara mma di egwu nke g’eme ka mmuo gi na ezumike ezumike banyere elu igwe di ohuru.
Ebee ka ndagwurugwu Jiuzhaigou dị na China?
Ndagwurugwu Jiuzhaigou mara mma dị na mpaghara Sichuan na China ma nwee ike ịnweta ya na Beijing ma ọ bụ Chengdu.
2. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Shennongjia Na China
Hụ Sichuan Snub-nosed Monkey, ịkwesighi ịga ogologo n'ihi na enwe a na-adịghị ahụkebe bi n'oké ọhịa nke etiti China.. nke ahụ dị mma, ndị Shennongjia Nature Reserve na mpaghara Hubei bụ ebe enwe ọjọọ dị, ọcha agba, igwe ojii, agụ owuru, na Eshia ojii.
Na mgbakwunye, Reserve Reserve nke Shennongjia mara ezigbo mma site na elu elu na osimiri di elu. Site n'oge oyi ruo n'oge ọkọchị, echiche nke ọdịdị okike na-agbanwe n'afọ niile, na-ekwe nkwa ahụmịhe dị iche iche oge ọ bụla ị gara ileta. Otú ọ dị, oge kacha mma iji gaa bụ Mee ruo Septemba, na ị ga-akwụkwọ gị tiketi.
Ebe bụ Shennongjia Nature Reserve Na China?
Ebe nchekwa Shennongjia dị n'etiti China, ọ kachasị mma ịmebe anụ ọhịa gị na obodo Muyu.
3. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Ugwu Huangshan Na China
Ihe mmụọ nsọ nye ndị na-ede uri na ndị edemede, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ugwu Huangshan bụ ebumnuche anụ ọhịa dị ịtụnanya n'ụwa. Huangshan dị na mpaghara ihu igwe dị na mpaghara Anhui. Ya mere, na mgbakwunye na ugo ahụrụ, na Asia ohia, osisi na okooko osisi ebe a bụ ndị kachasị mma na ndị pụrụ iche na China niile.
Umu anumanu di obere’ ebe obibi bụ osisi pine ochie na usoro okwute granite, ebe inwere ike iru n’elu igwe ojii. Niile ị chọrọ ime bụ ịhọrọ otu n’ime ha 70 ọnụ ọgụgụ dị elu na mpaghara maka ikuku ndise amam-ihe nke ndoputa ihe. Ndabere ala, na ọtụtụ ihe ịhụ, ị kwesịrị ị na akwụkwọ 2-3 ụbọchị maka ụbọchị a na-agaghị echefu echefu ezumike ezumike na Huangshan.
Ebee ka ugwu Huangshan dị na China?
Ugwu Huangshan bu 3 awa dịpụrụ adịpụ na Shanghai site elu-ọsọ ụgbọ okporo, na mpaghara Anhui.
4. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Liguria maka Dolphins Na Italytali
Liguria na Cinque Terre bụ ndị ama ama maka ụsọ oké osimiri na obodo ndị mara mma. Ọ bụrụ na ị maghị, Liguria bụkwa ebe dị egwu maka ikiri azụ na azụ dolphin. Site na Mee rue Septemba, ị nwere ike ịga otu n'ime ọtụtụ njem ụgbọ mmiri na Liguria n'ọchịchọ ahụ mgbe na-adọrọ mmasị ndụ mmiri na Italytali.
The ọmarịcha osimiri na ọnụ ọnụ ugwu dị na Cinque Terre jupụtara coves zoro ezo, na okpuru oké osimiri ebube. Ya mere, si n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ ndakpu mmiri, na ịkwa ụra, anụ ọhịa nke mmiri dị na Liguria ga-eju gị anya. O doro anya na ezumike ezumike anụ ọhịa na Liguria bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nọrọ n'oge ọkọchị.
5. Ememe Anụmanụ Na Pyrenees
Nnụnụ ndị na-eri anụ dị ka ugo ọlaedo na-efego n'elu isi gị, na chamois na ibex na ụzọ ụkwụ, na Pyrenees bụ ọmarịcha anụ ọhịa ọzọ na-aga n'ụwa. Ugwu dị ịtụnanya, mkpuchi snow, na okooko osisi, na French Pyrenees park bụ otu nke n'elu ọhịa ezumike ezumike aga Europe.
Ya mere, na mgbakwunye na njem na ebube Pyrenees, ị nwere ike ịga njem njem anụ ọhịa bea, ma ọ bụ anụ oriri anụ ọhịa foto. Ọ bụ ezie na Pyrenees French bụ ebe ezumike ama ama na Europe, Mpaghara sara mbara nke na ị gaghị echegbu onwe gị maka ndị njem ndị ọzọ na-atụ egwu anụ ọhịa na mma anụmanụ.
Kedu ụzọ kachasị mma iji nweta Pyrenees French?
Inweta Eurostar site na London, na mgbe ahụ TGV ụgbọ okporo ígwè si Paris ma ọ bụ Lille ka Toulouse bụ ihe kasị mma-ejegharị ejegharị na-aga Pyrenees.
Lyon na Toulouse Na A Train
Paris na Toulouse Na A Train
Ọ dị mma iji ụgbọ okporo ígwè gaa njem
Bordeaux Na Toulouse Na Traingbọ oloko
6. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Ndị Camargue na France
Ejiri nchekwa obodo Camargue dị na France 1972 na bụ a ogige mba echedoro. ka, lagoons na marshland bụ ala kachasị echebe na Europe, na ebe a bụ ụlọ 400 ụdị nnụnụ na flamingo ka ukwuu.
Ebe ị ga-enwe a ohere na-eje ije tinyere ndị kasị ibu osimiri na Europe, Delta, chọọ ịnyịnya ọhịa. Ọzọkwa, some nke nnụnnụ pụrụ iche ị pụrụ ịhụ ebe a bụ Purple Herons, Obere obere, na Gull onye isi oji.
Oge kachasị mma iji gaa bụ n'oge ọkọchị mgbe nnụnụ na-abata na ịnyịnya isi awọ.
Kedu ụzọ kachasị mma iji gaa Camargue?
Nwere ike were ụgbọ oloko si Paris gaa Nimes, Marseille, ma ọ bụ Arles, mgbe ahụ ụgbọ ala.
7. Fisser Hofe Na Ọstrịa
517 kilomita nke anụ ọhịa, Fisser Hofe nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ Tyrol bụ otu n’ime ihe nzuzo nzuzo Austria kacha mma. Ọtụtụ amaghi ebe a, mana ebe a ị ga - ahụ ebe mara mma maka foto foto anụ ọhịa.
Na oge opupu ihe ubi Fisser Hofe na-eto eto, ma ị nwere ike inwe ihu ọma ijide ọmarịcha Apollo urukurubụba. ikekwe, ị ga-ahụ ugo Black n’elu mmiri, ma ọ bụ nke ọzọ anụ chamois, ibex, na anụ ọhịa. Otú ọ dị, ụzọ kachasị mma iji hụ ụmụ anụmanụ ndị ahụ na-adịghị ahụkebe na-arị ugwu ahụ, ka 3000 mita, na otu n'ime ọtụtụ ụzọ ụkwụ na Fisser Hofe.
Kedu ụzọ kachasị mma iji banye Fisser Hofe na Austria?
Can nwere ike njem site OBB ụgbọ oloko si isi obodo na Austria gaa Fiss obodo na Tyrol. Salzburg, Vienna, ma ọ bụ Innsbruck to Fiss by OBB train are popular ewu ụgbọ okporo ígwè njem ụzọ gasị.
8. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Anụ ọhịa Na Osimiri Danube
site Black ọhịa na Germany, gafee Europe na Romania, Osimiri Danube bụ otu n'ime ebe kachasị mma anụ ọhịa n'ụwa. Ya mere, dị ka nnukwu mmiri na mmiri, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Osimiri Danube bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji hụ ụdị anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ.
Ọmụmaatụ, obere obere eze ndị Europe bụ otu n'ime ihe ndị mara mma 400 ụdị nnụnnụ bi na Osimiri Danube. Na mgbakwunye, in Ugwu Zemplen, na ogige mba Aggtelek, I nwere ike ile 73 umu anumanu, dị ka uhie fox na aja aja aja.
9. Merfelder Bruch Nature Reserve Na Germany
Home to the last ìgwè ehi nke ịnyịnya ọhịa na Europe na otu n'ime ndị kasị mma nlegharị anya mgbe bụ n'anya nke na-agba ọsọ ịnyịnya ọhịa. Ya mere, Ogige Hohe Mark bụ ebe kachasị amasị maka ikiri anụ ọhịa.
Na mgbakwunye, n'etiti oke ohia na ala ahihia ndu, you might be lucky to spot the beautiful Dulmen Pony. Dulmen Pony bụ ụdị ịnyịnya, bi na Merfelder Bruch, N'obodo ịnyịnya ọhịa, ma ọ bụ Rhine-Westphalia. Merfelder Bruch bụ ebe nsọ maka ụdị ịnyịnya abụọ na-ebi ndụ na ebe obibi ha.
Gịnị Bụ Bestzọ Kasị Mma Iji Njem Iji Merfelder Bruch?
Akinggbọ oloko si Britain ma ọ bụ ebe ọ bụla na Germany ruo Kolon na North Rhine-Westphalia. Mgbe ahụ i nwere ike isonye na njem ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala na Merfelder Bruch.
10. Ebe kacha mma anụ ọhịa na ụwa: Wengen Ifuru nke Switzerland Alps
All ebube ebe anyị 10 kasị mma anụ ọhịa aga na ụwa bụ n'ụlọ ka rarest ọhịa na Europe. Otú ọ dị, Wengen bụ ebe obibi nke anụ ọhịa na-enweghị atụ na mbara igwe. odude na Switzerland Alps, echiche ndị dị ebe a dị oke egwu, ya na ugwu snow nwere, ndagwurugwu lush na-acha akwụkwọ ndụ, nsụda mmiri, na ifuru kachasị dị egwu.
In July the wild butterflies adorn the rare Lady Slipper Orchid, opi gentians, saxifrages, na okooko osisi ndị ọzọ mara mma n'akụkụ Eiger glacier. Okooko osisi ndị a mara mma na-etolite na elu ugwu Switzerland Alps, gbagoro ọmarịcha ndagwurugwu Lauterbrunnen. Ya mere, Jikere bulie ije n'igwe-oji ma doo anya n'igwe na-acha anụnụ anụnụ iji hụ ọrụ ebube ndị a nke okike.
Kedu ụzọ kachasị mma iji nweta Wengen Bernese Oberland?
Take a train to Lauterbrunnen valley, na mgbe ahụ a ụgbọ okporo ígwè ruo Wengen obodo.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem a na-agaghị echefu echefu na otu, ma obu ihe nile 10 ebe kachasị mma anụ ọhịa na ụwa: gafere Europe ma ọ bụ China site na ụgbọ oloko.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Wildlife aga The World” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
amazingwildlifeholidaysworldwide animal Bestnaturereservesineurope BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationsworldwide WildelifeDestinations anụ ọhịa